Naing BSell | Item - 12 ports usb charger
Red Mi 6(32G)5.10.2018
12 PORTS W-858 USB Fast Charger
တန်ဖိုး ၂၆၀၀၀ ကျပ် (26000ks)
📶 ITနယ်ပယ်တွင် USB နှင့်အသုံးပြုရသော DEVICE များစွာ ပေါ်ပေါက်လာရာ Hand Phone မှစ၍ နေ့စဉ် အားသွင်းအသုံးပြုရသည့် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများအတွက် အရည်အသွေးမြင့်သော၊ စိတ်ချရသော၊ အန္တရာယ်ကင်းသော Charger များကို အသုံးပြုကြရန် လိုအပ်လာပါသည်။
🌟 W-858 USB Charger သည် USB ၁၂ပေါက်ပါရှိပြီး 5V 3.5A ၄ပေါက်၊ 5V 2.5A ၄ပေါက်၊ 5V 1.5A ၄ပေါက် ခွဲထားသဖြင့် မိမိလိုအပ်သည့်အမ်ပီယာ၊ အနှေး/အမြန် လိုသလိုရွေးချယ် သွင်းနိုင်ပါသည်။
📻 တစ်နေကုန်သုံးထားသမျှ ဖုန်း၊ Power Bank၊ ကင်မရာ၊ ဓါတ်မီး စသည်တို့ကို ညဘက်တပြုံတပင်စုပြီး အားသွင်းနိုင်ဖို့၊ electronic ဆိုင်များအတွက် ရောင်းမည့်ပစ္စည်းများစွာကို Device ၁၂ခုစလုံးအတွက် နေရာကျယ်မယူပဲ တစုတဝေးတည်း အားသွင်းထားနိုင်ဖို့ အလွန်အဆင်ပြေပြီး Save & Safe ဖြစ်ပါသည်။
✨အချို့သော chargerများမှာ မီးအားဆောင့်တက်ခြင်းကြောင့် အားသွင်းထားသော တန်ဖိုးကြီးဖုန်းများပါ ပျက်စီးတတ်ကြပါသည်။ W-858 သည် မိန်းထုပ်ကြီးကြီးဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး 100~240V အတွင်း support လုပ်သောကြောင့် မီးအားကျနေချိန်တွင် 100Vအထိဆင်းသော်လည်း ဆက်လက်အားသွင်းနိုင်ပြီး မီးအားဆောင့်တက်၍ 240V ဖြစ်သွားလျှင်သော်မှ မပျက်စီးနိုင်သဖြင့် iPhone series များ အတွက်ပါ အဆင်ပြေပြေ စိတ်ချစွာ သုံးနိုင်ပါသည်။
1. Quality: high quality phone holder.
2. Colors: The Color is Black
3. Mix Models and Colors: We accepct mix models and colors. Please leave message the models and colors you want.
* Product Name: Multi-function AC power adapter
* Model NO.: WLX-858
* Type: AC TO DC
* Size: 171x75x35mm
* Cable Length: 1.2m(replaceable)
* Input voltage: 110-240V
* Input Current: 0.35A(MAX)
* Output Current: 5V/12A(MAX)
* Plug: UK / US / EU / AU (Optional)
* Input: AC 110-240V, 50/60Hz
* Output: 12 port 5V/1A-2.4A